Shuruudaha isticmaalka - blackjack77somalia.com
Ugu Weyn Ee	/ Shuruudaha iyo xaaladaha
Marks The (oo ay ka mid logos, alaabooyinka iyo calaamadaha adeegga) laga helay on Site waa sifooyinka blackjack77somalia.com ama qaybaha kale ee saddexaad. Isticmaalka kasta oo Marks ku leedahay Site ee xisbiga kale ee saddexaad waa ka mamnuuc. Qalabka iyo Services of blackjack77somalia.com waxaa ilaaliya copyright iyo sharciyada kale ee ku saabsan hantida aqooneed, sidaas darteed wax kasta oo isticmaalka aan la fasaxin oo ka mid ah waxaa loo tixgeliyaa sida xadgudub ku ah sharciyada sida. blackjack77somalia.com users uma hanato express kasta ama xuquuqda maldahan hoos shatiyada kasta, xuquuqda daabacaada, alaabooyinka ama ganacsan info qarsoon ku saabsan Qalabka ama / iyo Services. isticmaal kasta (tus dib-u-qoraal, dayanayaan iyo tarjumida) macluumaadka laga helay on Site ah (documents tus iyo sawiro) oo aan ogolaansho kasta oo ku qoran of Site ah waa ka mamnuuc. Mid ka mid ah Alaabeynta ee hoosyimaada halkan macluumaadka ma deeq lahayn ama damaanad ruqsad kasta oo ka yar wixii xuquuqda daabacaada ama shatiyada.
Diraya kasta oo qalabka, macluumaadka, farsamooyinka, fikrado ama fikradaha (jawaabcelinyo) si Site ah, user ogolaado oo qiray, in:
jawaabcelinyo ma jiraan lahaansho iyo macluumaad qarsoodi ah;
blackjack77somalia.com ma kac ama fulin waajib mid ka mid ah nooc kasta oo express ama sir ahaana ku saabsan jawaabcelinyo ah;
ka blackjack77somalia.com waa iyo xaq u leeyihiin inay isticmaalaan ama shaaca celinta kasta oo ujeeddo kasta ee dunida oo dhan ah lasameeyay kaliya;
Jawaabcelinyo noqon hantida blackjack77somalia.com ah, oo aan waajib ku ah nooc kasta oo si user ah,
blackjack77somalia.com ma bixiso magdhaw ama celinta nooc kasta.
Damaanad IYO fogaynta
SITE waxay bixisaa Dhammaan alaabta IYO ADEEGYADA "AS WAA". blackjack77somalia.com afeefanaysaa dhammaantooda muujiye AMA fasaxyada ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn maldahan damaanad MERCHANTABILITY IYO OF UJEEDO JIRDHISKA EE GAAR, TO THE FULL xadka sharcigu ogol yahay KHUSEYSO. blackjack77somalia.com MA IYO HUBAAL ma KARAA IN midkood SITE; AMA WAX KA KOOBAN, MAADDOOYINKA, MACLUUMAAD, ALAABADA (SOFTWARE JIRAAN) IYO / AMA ADEEGYADA LA HELI KARO IN AAD KU AMA ILAA SITE THE; Server, AMA ILAA E-mails ka heshay blackjack77somalia.com WAA LACAG LA'AAN fayraska IYO / AMA OTHER HARMFULL QAYBAHA UU KA KOOBANYAHAY blackjack77somalia.com QABTO NO MASUULIYAD EE WAXYEELADA KASTA darsa KA ISTICMAALKA SITE AMA OF WAX KA KOOBAN, MACLUUMAAD, MAADDOOYINKA, ALAABADA (oo ay ku jiraan SOFTWARE) IYO / AMA ADEEGYADA LA HELI KARO IN AAD KU AMA ILAA SITE THE, OO AY KU JIRAAN, laakiin aan ku xaddidnayn dhaca ah, ciqaab, toos ah, dadban, IYO WAXYEELADA darteed, WAXYEELADA oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn THE IN keeni karto LUMIS EE mACLUUMAADKA AMA faa'iidada, XATAA HADDII digay SUURTO EE WAXYEELADA SIDA. Dadka isticmaala si cad u fahmay waana oggolaaday in isticmaalka SITE KANU WAA AT halista KELIYAA.
Wixii khalad ah oo ay ku jiraan farsamo ama wax kale, qaladaad typographical ama qalad waa u suurtoobaan. blackjack77somalia.com xaq u leedahay inay wax isbedel ah Adeegyada iyo Qalabka on Site mar kasta oo aan wax ogeysiin ah.
The Qalabka iyo / ama Adeegyada on Site ayaa laga yaabaa out of date, iyo blackjack77somalia.com ka dhigaa ma ka go'an tahay wax alla wixii ay u cusboonaysiiyaan qalabka sida ama adeegyada.
Dhammaan xiriirada boggaga xisbiga saddexaad ma aha in ay gacanta ama mas'uuliyad ah blackjack77somalia.com.
blackjack77somalia.com ka dhigaa ma Wakiilada wax alla wixii ku saabsan wax kasta oo Website kale oo aad dooran kartaa in ay helaan iyo in lala marayo Site this. The links ee Site this yihiin oo keliya la siiyaa sahasho, iyo blackjack77somalia.com ma qabanayo ama aqbalin ama aqbalaan mas'uuliyada wax content ee Shabakadaha Internetka ee sida.